I-garlic, njenge-anyanisi, isityalo esivamile kakhulu esisetyenziselwa ukutya. Ikwahlukileyo yinkcazo ekhethekileyo kunye nephunga. Iqukethe izixhobo eziphilayo eziphilayo, ezibonisa ukunambitheka okungavamile. Ukupheka, thabatha izinyo okanye iinkcazo zeelbolbhu.
Ukongezelela, i-garlic eluhlaza (intsha) nayo iyamkelwa ngokupheka: iintolo zayo kunye namacembe. Igarlic ehlaza yayisetyenziswa ngabantu baseIndiya kuqala. Kwixesha la mandulo, ukwakheka kwempucuko yasendulo ngaphandle kwayo, akenzanga kwaye udidi lwamachiza.
Iyintoni ukusetyenziswa kwayo?
Inqobo yakhe ekhethekileyo, kunye nokuphulukisa izakhiwo zaziqhelaniswe nabantu ngexesha elidlulileyo. AmaRoma kunye namaGrike, amaYiputa kunye namaArabhu, amaJuda ayazi malunga neenzuzo ezinkulu ezinokuthi umlenze awusondeza emzimbeni womntu. Ngako oko, sele sele sele ikhona ngaloo mihla isityalo sasiyimfuneko kakhulu. Ufumene imibhalo yesandla yamandulo, eyachaza amayeza angaphezu kwama-800, eyenziwe ngesigcawu.
E-Rashiya, i-garlic eluhlaza ikwaziwa kwakhona ixesha elide. Amagqabi akhe amancinci atshawa asetyenziswa njengendlela yokulungisa i-beriberi. Ziyihlumela legalikhi eluhlaza okwangoku kuphawulwa kuqala kwimibhede yabalimi.
Umxholo we-caloric wesityalo uphantsi kakhulu (40 Kcal) nge 100 gram yemveliso. Eli nqanaba lekharikhi yegalikhi eluhlaza, kunye nexabiso elaneleyo lamaminerali kunye namavithamini, kwenza kube lula ukuqwalasela umkhiqizo njengento yokutya kunye neyonyango. Ngokusetyenziswa kwayo rhoqo, iyakuchukumisa ngokukhawuleza umzimba wonke. Iingcali zenzululwazi ziye zafakazela ukuba iingeniso zempilo zabantu zikhulu kunaloo garlic kunokuba zivela e-anyanisi eluhlaza. Ama-bulbs ayo aqukethe iprotheni yemifuno, kunye neengxelo ezingaphezulu. Amaqabunga ayo amancinci kwaye amade aqulethe i-vitamin C eninzi, ngaphezu kweentsiba ze-anyanisi eluhlaza. Kanye kunye ne-sorrel ingakhula kwaye idliwe yonke unyaka.
Amagqabi ahlaza aphelisa i-phytoncides emoyeni. Izifo zeentlobo ezininzi zezifo azikwazi ukuphuhlisa nokuphindaphinda kule ndawo. Phakathi kwenani elipheleleyo lezityalo ezilinywayo, azikho izityalo ezinjalo ezineentlobo ezininzi zezityalo, njengegalikhi. I-Garlic isityebi kakhulu kwi-calcium kunye ne-iodine. Ngokomxholo wentsimbi, ayikho ngaphantsi kwamaapula aluhlaza. Iphunga elikhethekileyo liqhotyoshelwe kwiimpawu zelulfure. Ioli efunekayo yegalikhi eluhlaza izaliswe ngamayeza anokukhusela ukuphuhliswa kwamaninzi ezincinci kunye neebhaktheriya. I-Ogorodniki ityala kufuphi nezinye izityalo, ukukhusela ezi zityalo kwisifo. Amaqabunga amancinci asemagqabini anesityiksi. Zisebenzise ngokukhethekileyo kwifomu entsha.
Kwiminyaka emininzi sele isetyenzisile esi sityalo esimangalisayo kwiinjongo zokwelapha. Kwaye kwangoku, uphando lwezenzululwazi luqinisekisa amandla alo okuphulukisa. Iingcali zenzululwazi ehlabathini lonke zithi i-garlic eluhlaza ingakwazi ukulwa nenani elikhulu lezifo kwaye liyasebenza kakhulu.
Iipropati eziyincedo eziphambili
Ikhuthaza ukuphucula okukhulu kwinkqubo yokutya
Unempembelelo ekunciphiseni ushukela wegazi
Iyancipha ngokukhawuleza ngokwaneleyo uxinzelelo lwegazi
Unokusebenza njenge-choleretic, diuretic, diaphoretic
Awuvumeli ukuphuhlisa i-neoplasms ye-ecological
Uphucula ukusebenza komsebenzi wokuphefumula
Isebenza njenge-antihelminthic kunye ne-antiseptic agent
Ukuphucula ukujikeleza kwegazi kwingqondo
Kucingelwa ukuphulukiswa kwesilonda kunye ne-anesthetic
Oososayensi baseUnited States sele baveze ukuba i-garlic eluhlaza ingonakalisa iiseli ze-glioblastoma. Le ngxaki yonyango engapheliyo. Amalungiselelo adalwe ngesiseko segalikhi eluhlaza, ngokugqithiseleyo ukulwa nokutshatyalaliswa kweeseli zomhlaza ezibulalayo.
Ndingayifumana phi i-garlic entsha?
Lungiselela i-primer efanayo. Kwivenkile, thengela igalikhi, kungcono ngembewu esele ihlume. Ukwahlula intloko kwiintsimbi, uzibeke emhlabathini. Beka isikhephe kwindawo efudumeleyo kwaye ilungileyo, ukuthambisa kufuneka kube ngokulinganayo. Ngeveki unokwidla i-garlic encinane eluhlaza. Kumele unqunywe ngommese kwaye ngokukhawuleza ubeke isaladi okanye esinye isitya. Phula amazambane aphekiweyo ngegliclic eqoshiwe. Ndikholelwe, esi sidlo siya kunceda wonke umntu ukuba ajonge. Bon appetit!
Unyango lwamaqanda ekhaya
Ziziphi amayeza ezitya zokubhabha?
Indlela yokuphatha umkhuhlane kunye ne-phlegm?
UPetr Kislov uthetha ngezahlulo kunye noAnastasia Makeeva noPolina Gagarina
Inkomfa yenkomfa yeVladimir Putin: ixesha eliqaqambileyo
Ukutya okulungileyo kunamadoda
Ukubeleka ngexesha lokukhulelwa
I-recipe elula ye-pasta ene-safari kunye ne-ricotta
Amazambane aphekiweyo kunye nenyama kunye ne-mozzarella